Nezve - OUZHAN DZAISHANDISWA (SHANGHAI) CO., LTD
Maitiro anosarudza zvese, ruzivo rwunofunga kubudirira
Ouzhan (Shanghai) Co, Ltd. ikambani inosanganisa indasitiri nekutengeserana. Iyo fekitori iri muBuilding 38, Jinguo Industrial Park, No. 500, Zhenkang Road, Jinshan District, Shanghai. Iyo kambani inovhara nzvimbo ye1200 mativi emamirimita uye ine vangangoita makumi matatu evashandisi, gumi mainjiniya uye mashanu emhando yekuongorora. Iyo hombe yekumusoro-kumagumo yekugadzira uye yekugadzirisa michina inodarika makumi matatu. Vatinoshanda navo vanosanganisira Trutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco zvichingodaro.
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. ari nyanzvi customized kugadzira marudzi ose michini uye midziyo zvikamu. Yedu yekugadzira matekinoroji anosanganisira CNC azvikuya, CNC kutendeuka, Yemukati uye yekunze chaiyo pamusoro kukuya, Laser kucheka uye jira simbi kukotama. CNC machine, Turn-azvikuya machine, 4/5 akabatana CNC machine, nokuchengetedza uye kufa-Kudzingwa uye zvichingodaro.
Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana, senge machira emachira, kugadzira simba remhepo, michina yemarabhoritari, zvishandiso zvekurapa, mwenje wekutengesa, muchadenga uye nezvimwe.
Yedu yepakati yekugadzira michina inotumirwa kubva kuSwitzerland neJapan.
Isu tine mainjiniya gumi munzvimbo yedu yeR&D, vese vari vanachiremba kana mapurofesa kubva kuYunivhesiti yeSainzi neTekinoroji yeChina.
Tine hunyanzvi hwehunhu hwekuongorora vashandi uye zvigadzirwa, zvinoenderana nematanho epasi rese kune zvigadzirwa zvako kuti uedze, uye ubudise yakadzama bvunzo mushumo.
4. OEM & ODM inogamuchirwa
Yakagadziriswa saizi uye maumbirwo aripo. Welcome to share your 2D or 3D drawings with us, ngatishandei pamwechete kuti hupenyu huwedzere kugadzira.
Titarise isu muchiito!
Parizvino isu tine seti dzinopfuura makumi matatu emhando yepamusoro yemuchina uye yekuyedza michina, mazhinji acho anotengwa kubva kuSwitzerland neJapan.
Ouzhan ine mitsara misere yekugadzira uye inogona kuburitsa zvidimbu zviuru zvitatu zvezvinhu zvakapedzwa nezuva rimwe.
Isu tine yedu yepasi rese logistics mumiriri munzvimbo yemuno, uye isu tinogara tichipedzisa kugadzirwa nenguva, iyo inogona kutumirwa kumahombekombe egungwa kana nhandare nezuva rimwe chete.
Zvigadzirwa zvedu zvichaedzwa katatu zvisati zvaendeswa: ① otomatiki detector; ② Manual kuona; ③ Sampling bvunzo. Pakupedzisira, bvisa iyo bvunzo mushumo.
Tekinoroji, kugadzira uye kuyedza
Ouzhan Trade (Shanghai) Co, Ltd. yakavambwa muna 2005 uye yave kugadzira michina zvikamu kwemakore gumi nemashanu. Kubva zvatanga, mushure mekutambira kwevatengi '3D kana CAD mifananidzo, mainjiniya edu anozoiongorora. Pamusoro pekusangana nezvinodiwa nevatengi, tinogona kazhinji kuisa pamberi pehunyanzvi mazano ekuchengetedza vatengi 'mutengo kana nani kupedzisa kugadzirwa.
R & D KUGONESA
Asi kune avo vatengi vasina madhirowa, edu magener anogona kukubatsira.
1. Kana iwe uine chigadzirwa chese-pasherufu chaunoda kuti isu tigadzire, asi iwe usina madhirowa e3D, iwe unongoda kutumira chigadzirwa chako kwatiri, tinogona kunyora mifananidzo yacho wozotanga kuburitsa.
2. Kana iwe usina chigadzirwa kana madhirowa, zvakanaka. Ingogovana mazano ako nesu. Mainjiniya edu achagadzira dhizaini zvinoenderana nezvamunoda uye ozvitumira kwamuri kusimbiswa mushure mekuedzwa.
Ouzhan parizvino ine vanopfuura vashandi ve30 uye vanopfuura gumi% vaneMasters kana madhigirii eDhokotera. Mainjiniya edu gumi vakapedza kudzidza kubva kumusoro Chinese mayunivhesiti makuru mune michina uye vane hupfumi ruzivo rwehunyanzvi. Vashandi vedu vekunze ndevanyanzvi vezvekutengeserana vekunze, vane hunyanzvi mukutengeserana kwekunze. Iwo madhipatimendi maviri ekambani yedu anogona kubatsirana uye kukuunzira basa rakanakisa.
Hunhu hwekambani hwekambani hunogona chete kuumbwa kuburikidza neImpact, infiltration uye kusangana. Kuvandudzwa kweOuzhan kwakatsigirwa nehunhu hwepamoyo mukati memakore apfuura ------- Kutendeseka, Kugadzira, Mutoro, Kubatana.
Ouzhan inogara inotevedzera kune musimboti, vanhu-vanotungamira, kutendeka manejimendi, mhando yepamusoro, mukurumbira wepamberi Kutendeseka kwave iyo chaiyo sosi yekukwikwidza kweOuzhan.
Tine mweya wakadai, Takatora nhanho dzese nenzira yakatsiga uye yakasimba.
Innovation ndiyo musimboti wetsika yaOuzhan.
Innovation inotungamira mukuvandudza, iyo inotungamira mukuwedzera simba.
Zvese zvinotangira kubva kutsva.
Vanhu vedu vanoita zvitsva mukufunga, mashandiro, tekinoroji uye manejimendi.
Bhizinesi redu rinogara riri munzvimbo yakamisikidzwa yekugadzirisa shanduko uye shanduko yezvakatipoteredza uye kugadzirira mikana irikubuda.
Ouzhan ane simba pfungwa mutoro uye basa kuti vatengi uye nzanga.
Simba rebasa rakadai harigone kuonekwa, asi rinogona kunzwika.
Yakagara iri iyo yekutyaira kukurudzira kweOuZhan.
Kubatana ndiko kunobva budiriro
Isu tinovavarira kuvaka rakabatana boka
Shandai pamwechete kugadzira yekukunda-kuhwina mamiriro anoonekwa sechinangwa chakakosha kwazvo mukusimudzirwa kwemakambani
Ouzhan yakwanisa kuzadzikisa kusanganisa zviwanikwa, kuwiriranirana, kungofanana nedhipatimendi rezvehunyanzvi nedhipatimendi rezvekutengeserana, rega vanhu vane hunyanzvi vape mutambo uzere kuhunyanzvi hwavo.
1. Yakagadziriswa michina zvikamu zvebasa
2. Misa inogadzira
3. Chigadzirwa dhizaini
4. Sample kugadzira
5. Rutsigiro rwehunyanzvi
6. Kuedzwa kwechigadzirwa
7. Logistic uye Export sevhisi
8. Pashure-pekutengesa sevhisi